China 1000V 1500V OEM ngokwezifiso MC4 Solar Isandiso Ikhebula nge DC Manzi Isixhumi Male Female ifektri kanye nabaphakeli | UBUNGOZI
Ikhebula le-1000V elilodwa elilodwa
Ikhebula le-1000V Double Core
Ikhebula le-Single Core le-1500V
Ikhebula le-1500V Double Core
Umkhiqizi we-1000V TUV PV1-F Solar Cable 4mm
Isixhumi Solar Panel Isixhumi MC4 Nge DC 1000V TUV Kuvunyelwe
Ikhebula le-DC 1500V H1Z2Z2-K Solar Panel izintambo 6mm2
I-Multi Contact MC4 Solar Cable Connector 1500V 50A
Solar Micro Inverter for Solar System MPPT 60HZ 600W ...
30A 40A 50A 60A 12V 48V Intelligent MPPT Solar Ishaja ...
1000V Solar yangaphandle Amandla Ukuvikelwa Kudivayisi yokwanda Ar ...
1000V DC Solar PV Fuse Umnikazi 10x38mm for Solar PV F ...
Auto Wire Car Extender Isixhumi 2 Pin SAE Ibhethri C ...
2to1 MC4 Y Isixhumi Ixhuma Iphaneli Solar ku ...
1000V 1500V OEM ngezifiso MC4 Solar Isandiso Ikhebula ...
MC4 T Isixhumi Wiring Solar Panel 2to1 ochungechungeni
10x38mm Solar Fuse emgqeni umnikazi 1000V MC4 Fuse Conn ...
1000V 1500V OEM ngokwezifiso MC4 Solar Isandiso Ikhebula nge DC Manzi Isixhumi Male Female
I-1000V 1500V i-OEM eyenziwe ngokwezifiso ye-MC4 Solar Extension Cable ene-DC Isixhumi Esingenamanzi Owesilisa Owesifazane isetshenziswa ohlelweni lweSolar PV phakathi kwephaneli lelanga ne-Inverter noma ibhokisi lesilawuli. Zimelana ne-UV futhi azinamanzi nge-IP68, zingasebenza ngaphandle ama-25years. Okubalulekile, i-MC4 Extension Cable ingaba yi-OEM ngobude obuhlukile nosayizi wamakhebuli njengoba udinga.
Ikhebula Usayizi: 2.5mm2, 4mm2, 6mm2
Uxhumano: Isixhumi seMC4
Amandla alinganisiwe: I-DC 1000V, i-1500V
Isici: IP67 Manzi, UV Resistant
Ubude bekhebula le-OEM: Yebo
Ukusebenza Life: 25years
Incazelo yezintambo zezintambo zesifazane ezingama-MC4
I-1000V 1500V i-OEM eyenziwe ngokwezifiso ye-MC4 Solar Extension Cable ene-DC Isixhumi Esingenamanzi Owesilisa Owesifazane iqoqo lezintambo ezimbili ezenzelwe ukuxhumanisa iphaneli yelanga nesilawuli sokushaja. I-Adapter Kit ifaka izixhumi zeMC4 kolunye uhlangothi lokuxhuma okungenamandla kwipaneli yelanga, kanye nocingo oluveziwe kolunye uhlangothi ukuholela ngqo kusilawuli sokushaja. Le khithi yezintambo ibalulekile ekufakweni kwelanga ngaphandle kwegridi, uphahla noma izinga lomhlabathi, futhi inikezwa ngobukhulu obuhlukahlukene. Izintambo azivikeleki esimweni sezulu futhi zenzelwe ukumelana nokushisa okukhulu nokubanda. Le khithi yezintambo ilungele ama-Off-Grid Kits asukela ku-100W kuye ku-400W.
Le khebuli yokwandiswa kwe-MC4 inikezela ngobude obuhlukahlukene, kanye nosayizi ababili begeji ongakhetha kubo. Osayizi abahlukene bavumela ukwenza ngokwezifiso ngokuya ngezidingo ezihlukile zamakhasimende phakathi kwephaneli yelanga nesilawuli sokushaja.
Izinzuzo ze-Solar PV Wire
·Ukwahlukaniswa kodonga okubili
·Ukumelana okuhle kakhulu ku-UV, uwoyela, amafutha, umoya-mpilo ne-ozone
·Ukumelana okuhle kakhulu nokuhuzuka ·Halogen khulula, ilangabi cishe yizona ezisetshenziswa kabanzi, ubuthi ongaphakeme, ROHS
·Ukuzivumelanisa nezimo okuhle kakhulu nokusebenza kokuhlubula
·I-Voltage ephezulu nomthamo wamanje wokuthwala
·I-TUV, i-CE, i-ISO ivunyelwe
Usizo lweMC4 Solar Waterproof Isixhumi
· Iyahambisana neMultic Contact PV-KBT4 / KST4 nezinye izinhlobo ze-MC4
· Ukumelana ne-IP67 okungangenwa ngamanzi ne-UV, kufanelekile ezindaweni ezingaphandle ezesabekayo
· Ukucutshungulwa okuphephile, okulula nokusheshayo esizeni
· Ukuphepha kokukhwelana okunikezwa izindlu ezingukhiye
· Imijikelezo eminingi yokufaka nokuxhuma
· Iyahambisana nosayizi ohlukile wezintambo ze-PV ngokuvamile
· Umthamo wokuthwala wamanje ophakeme
Ukudweba i-MC4 Extension Wire (Emnyama, 1x4mm2, L = 2m, I-OEM iyamukeleka)
OEM ngokwezifiso Solar Isandiso Wire
1. Isixhumi seMC4 Owesilisa Kuya Kwabafazi Abelulwa Isandiso
2. MC4 Isixhumi Owesilisa / Owesifazane kuya ku-Tinned Bare Cable
3. Isixhumi Solar seMC4 ku-Anderson Power Isixhumi 50A
4. MC4 Solar Isixhumi SAE Isixhumi
5. Isixhumi se-MC4 kusixhumi se-LP20 Power
· Isipiliyoni seminyaka eyi-12 embonini yelanga nokuhweba
· Imizuzu engama-30 yokuphendula ngemuva kokuthola i-imeyili yakho
· Iminyaka eyi-25 iwaranti yeSolar MC4 Isixhumi, izintambo ze-PV
· Akukho ukuyekethisa ngekhwalithi
Langaphambilini 6 kuya ku-1 MC4 Splitter Ixhuma ama-Solar Panels ngokufana
Olandelayo: 2to1 MC4 Y Isixhumi Ixhuma Amapaneli Elanga ngokufana noma ngochungechunge
RISIN ENERGY CO., LIMITED. yasungulwa ngo-2010 futhi itholakala ku- "World Factory" edumile, iDongguan City. Ngemuva kweminyaka engaphezu kwengu-10 yentuthuko eqhubekayo nokuqanjwa kwezinto ezintsha, i-RISIN ENERGY isibe ngumhlinzeki ohamba phambili, owaziwa umhlaba wonke futhi othembekile waseChina Solar PV Cable, Solar PV Isixhumi, DC Circuit Breaker, Solar Ishaja Isilawuli, Micro Grid Inverter, Isixhumi okungangenwa, Umhlangano wekhebula le-PV, nezinhlobo ezahlukahlukene zezesekeli zohlelo lwe-photovoltaic.
Thina i-RINSIN ENERGY ingumhlinzeki we-OEM & ODM ochwepheshe be-Solar Cable ne-MC4 Solar Connector.
Singakunika amaphakheji ahlukahlukene njengama-cable rolls, amabhokisi, izigubhu zamapulangwe, ama-reels nama-pallets ngobuningi obuhlukile njengoba ucela.
Singaphinda sinikeze izinketho ezahlukahlukene zokuthunyelwa kwekhebula lelanga kanye nesixhumi se-MC4 emhlabeni wonke, njenge-DHL, FEDEX, UPS, TNT, ARAMAX, FOB, CIF, DDP ngolwandle / ngendiza.
SIPHUMA I-RISIN ENERGY inikeze ngemikhiqizo yelanga (Izintambo Zelanga kanye ne-MC4 Solar Connectors) kumaphrojekthi wesiteshi selanga emhlabeni wonke, atholakala eSoutheast Asia, Oceania, South-North America, Middle East, Africa nase Europe njll.
Isistimu yelanga ifaka ipaneli yelanga, ubakaki wokufaka ilanga, ikhebula lelanga, i-MC4 isixhumi selanga, amakhithi wethuluzi lelanga le-Crimper & Spanner, i-PV Combiner Box, i-PV DC Fuse, i-DC Circuit Breaker, i-DC SPD, i-DC MCCB, iSolar Battery, i-DC MCB, i-DC Load Idivayisi, i-DC Isolator switch, i-Solar Pure Wave Inverter, i-AC Isolator switch, i-AC Home Appliacation, i-AC MCCB, i-Waterproof Enclosure Box, i-AC MCB, i-AC SPD, i-Air switchch ne-Contactor njll.
Kunezinzuzo eziningi zesistimu yamandla elanga, ukuphepha okusetshenziswayo, ukungcoliswa komoya, umsindo ongenamandla, amandla wekhwalithi ephezulu, akukho mkhawulo wendawo yokwabiwa kwemithombo, akukho ukuchitheka kukaphethiloli nokwakhiwa kwesikhashana.Yingakho amandla elanga eba kakhulu amandla adumile futhi athuthukisiwe emhlabeni wonke.
Q1: Iyini Imikhiqizo Eyinhloko yenkampani yakho? UnguMenzi noma umhwebi?
Imikhiqizo yethu eyinhloko yilezi Izintambo Zelanga, Izixhumi ze-MC4 Solar, Isiphathi se-PV Fuse, ama-DC Circuit breakers, iSolar Charge Controller, iMicro Grid Inverter, i-Anderson Power Isixhumi neminye imikhiqizo ehambelana nelanga.Singumkhiqizi onolwazi olungaphezulu kwe-10years elangeni.
Q2: Ngingayithola kanjani ikhotheshini yemikhiqizo?
Thumela umlayezo wakho kithi nge-E-mail: sales @ risinenergy.com, sizokuphendula kungakapheli imizuzu engama-30 ngesikhathi sokuSebenza.
I-Q3: Yenzani inkampani yakho maqondana nokulawulwa kwekhwalithi?
1) Zonke izinto eziluhlaza sikhethe eyodwa yekhwalithi ephezulu.
3) UMnyango Wokulawulwa Kwekhwalithi obhekene ngokukhethekile nokuhlolwa kwekhwalithi enqubeni ngayinye.
Q4: Ingabe uhlinzeka nge-OEM Project Service?
I-oda le-OEM ne-ODM lamukelwa ngokufudumele futhi sinokuhlangenwe nakho okuphumelele ngokuphelele kumaphrojekthi we-OEM.
Ngaphezu, ithimba lethu le-R & D lizokunikeza iziphakamiso zobuchwepheshe.
Q5: Ngingasithola kanjani iSampula?
Siyahlonishwa ukukunikeza amasampula MAHHALA, kepha kungadingeka ukuthi ukhokhe izindleko zeposi.Uma une-akhawunti yekhuriya, ungathumela isithunywa sakho ukuqoqa amasampula.
Q6: isikhathi esingakanani isikhathi sokulethwa?
1) Ukuze Sample: 1-3 Izinsuku;
2) Ama-oda amancane: Izinsuku ezi-3-10;
3) Ama-oda amaningi: Izinsuku eziyi-10-18.
10x38mm Solar Fuse emgqeni umnikazi 1000V MC4 Fuse ...
10A 20A 30A 12V 24V Intelligent PWM Solar Ishaja ...